Dad isku qoys ah oo cabay cano sumaysan ayaa la dhigay isbitalka magalada qardho - Awdinle Online
Dad isku qoys ah oo cabay cano sumaysan ayaa la dhigay isbitalka magalada qardho
January 18, 2020 (Awdinle Online) –8 ruux oo ka kooban laba qoys ayaa Jimcihii shalay la dhigay isbitaalka magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar kadib markii ay ku sumoobeen caano ay cabeen sida laga soo xigtay dhaqaatiirta isbitaalkaasi.
Dadka sumoobay waxa ku jira carruur yar yar kuwaasi oo midkood uu markii dambe geeriyooday sida ay xaqiijiyeen maamulka isbitaalka gacanta ku haya xaaladda caafimaad ee bukaannada.
Mas’uuliyiinta isbitaalku weli wax faahfaahin ah kama bixin sababta rasmiga ah ee keentay in dadkaas ku sumoobaan caanaha in ay la xiriirto wax lagu daray caanaha ama weelka lagu keenay oo aan nadiif ahayn.
Balse waxay sheegeen in ay la tacaalayaan xaaladda caafimaad ee bukaannada oo sida ay tilmaameen qaarkood soo soo bogsanayaan halka qaar kalena ay weli daawo iyo baxnaani ku socoto.
Previous articleMadaxweynaha puntland oo weerar afka ah ku qaaday dowladda fedraalka
Next articleBam gacmed lagu weeraray Guri ku yaalla Muqdisho oo dad dhaawacyo ka soo garay